ကလေးအပြစ်တစ်ခုခုလုပ်မိရင် အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းသောနည်းလမ်းများ – Burmese Baby
လူကြီးတွေတောင် အမှားလုပ်မိတတ်ကြတာ ကလေးတွေလည်း အမှားလုပ်မိတတ်ကြတာ မဆန်းပါဘူး။ အဲ့လို အမှား ပြဿနာလုပ်မိတာနဲ့ သူတို့လေးတွေကို အပြစ်တင်မစောပါနဲ့။ သူတို့ကို ကိုယ်ပိုင်ဖြေရှင်းနိုင် မယ့်အခြေအနေ မိဘကိုယ်တိုင်လည်း သူတို့ရဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ပေးမယ့်အခြေအနေတစ်ခု ကိုဖန်တီးပေးဖို့လိုပါတယ်။
ဆရာအောင်ကိုလတ်ရေးသားထားတဲ့ ကလေးအပြစ်တစ်ခုလုပ်မိရင် မေးသင့်တဲ့ မေးခွန်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ ဘာကိစ္စဖြစ်တာလဲ (သို့) ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းမေးခွန်းပါပဲ၊ အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။ မိဘတော်တော်များများက ကလေးပြသနာတစ်ခု တွေ့လာခဲ့ရင် “ မင်းသူ့ကိုအရင်ရိုက်လို့ သူမင်းကိုပြန်ရိုက်တာ မဟုတ်ဘူးလား” “ မင်းဆိုးလို့ ဆရာက မင်းကို ဆုံးမတာမဟုတ်ဘူးလား” စသည်ဖြင့် ကောက်ချက်နှင့်တွဲပြီး စစ်ဆေးမေးမြန်းတတ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းဟာ ကလေးကိုအပြည့်အ၀ ရှင်းပြခွင့် ပေးတဲ့မေးခွန်းပါ။ မှားပြီးအပြစ်တင် မိတာမျိုးကို ရှောင်ရှားစေနိုင်တဲ့အပြင် ကလေးတစ်ခုခု မှားယွင်း ခဲ့ရင်တောင်မှ သူ့ကိုရှင်းလင်းခွင့်၊ ချေပခွင့် အပြည့်အ၀ပေးထားတော့ အပြစ်ဝန်ခံရတာ ပိုမိုလွယ်ကူ စေပါတယ်။
Recommended for you – သင်နဲ့ သင့်တော်မယ့် ဆရာတစ်ယောက်ကို ခက်ခက်ခဲခဲရှာဖွေနေရတာလား
၂။ မင်းဒီကိစ္စကိုဘယ်လိုမြင်လဲ၊ ဘယ်လိုခံစားရတာလဲ၊
ကလေးတွေဟာ ပြသနာတစ်ခုခုနဲ့ ကြုံတွေ့ ရရင် မှားမှားမှန်မှန် ခံစားချက်အပြည့်နဲ့ အရမ်းကိုစိတ်လှုပ်ရှား နေတတ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါမျိုးမှာ သူပြောစရာရှိတာကို ပေးပြောလိုက်ပါ။ သူငိုစရာ ရှိရင်လည်း ပေးငိုလိုက် ပါ။ စိတ်သက်သာရာရစေတာပေါ့၊ စိတ်ပညာရှင်တို့ရဲ့အဆိုအရ လူတစ်ယောက် စိတ်တအား လုပ်ရှားနေတဲ့ အချိန်မျိုးမှာ ဘယ်သူစကားပဲဖြစ်ဖြစ် နားမ၀င်တတ်ဘူးတဲ့။ ကလေးကိုစိတ် ထွက်ပေါက်ပေးတဲ့သဘောပါပဲ။ ကလေးကိုငြိမ်သက်သွားတဲ့အထိစောင့်ပြီး တတိယမေးခွန်းကိုမေးလို့ရပါပြီ။
ဒီအချိန်မှာ ကလေးပြောတာ ဘယ်လောက်ပဲလွန်လွန်၊ ဘယ်လောက်ပဲသင့်ကို အံ့သြသွားပါစေ၊ ဆုံးမဖို့ဆန္ဒ မစောပါနဲ့၊ စိတ်ရှည်ရှည် နားထောင်ပေးပါ။ ပြီးရင်နံပါတ် (၄)မေးခွန်းကို ဆက်မေးလိုက်ပါ။
Recommended for you – လူအမျိုးအစား (၄) မျိုး….!!!
ကလေးပြောတဲ့ အတွေးလမ်းကြောင်းအတိုင်း စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ ရေစုန်မျောကြည့်ပါ။ နည်းလမ်းအသွယ် သွယ်၊ ဆင်ခြေအမျိုးမျိုး၊ မှန်တာတွေ မမှန်တာတွေ၊ သဘာဝ ကျတာတွေမကျတာတွေ၊ သူ့ရဲ့နည်းလမ်း မျိုးစုံကိုနားထောင်ပေးပါ။ စကားဖြတ်မပြောပါနဲ့၊ ကောက်ချက်ချမစောပါနဲ့၊ သူ့မှာဖြေရှင်းဖို့နည်းလမ်း ကုန်သွားပြီဆိုရင်….နောက်မေးခွန်းကိုမေးလိုက်ပါ။
၅။ မင်းပြောတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ ဖြေရှင်းရင် ဘယ်လိုအကျိုးရလဒ်မျိုး ရလာမယ်လို့မင်းထင်သလဲ
ကလေးဖာသာကလေး ဆန်းစစ်ပါစေ၊ စောစောကသူပြောခဲ့တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုချင်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ အကျိုးတရားတွေကို ရှင်းပြခိုင်းပါ။ တစ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မယ်။ နှစ်ဆိုရင် ဘယ်လိုဖြစ်လာမယ် စသည်ဖြင့်ပေါ့၊ ပြီးရင်နောက်မေးခွန်းတစ်ခု….
ကလေးဟာ သူအတွက်အဆင်ပြေဆုံးဖြေရှင်းနည်းလမ်းကို သူရွေချယ်ပါလိမ့်မယ်။ အကျိုးရလဒ် သိပြီးပြီ ဆိုရင် သဘာဝကျတဲ့ နည်းလမ်းကိုရွေးချယ်တတ်သွားစမြဲပါပဲ။ဒီမှာအရေးကြီးဆုံးအချက်က သူ့ရဲ့ရွေးချယ် မူကိုလေးစားရပါမယ်။ လူကြီးရဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့ပုံစံနဲ့ ကိုက်ညီချင်မှကိုက်ညီမယ်၊ ဒီလိုတော့မဆုံးဖြတ်သင့်ဘူး၊ မင်းဒီနည်းလမ်းတော့ ဒီလိုဖြစ်သင့်တယ် ဆိုတဲ့စကားမျိုး မပြောမိပါစေနဲ့၊ အဲလိုသွားပြောရင် သူတို့လေး တွေ နောက်နောင်လူကြီးကို မယုံကြည်တော့ဘူး။ သူရွေးချယ်တာ မှားကောင်းမှားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဖြည်းဖြည်းချင်း အမှန်သူတွေ့ရှိပါလိမ့်မယ်။ အမှားကို စမ်းစစ်တဲ့အကျင့် ၊ ဖြေရှင်းနည်းလမ်းရှာတတ်တဲ့ အကျင့်၊ နေရာလဲလှည်ပြီး စဉ်းစားတတ်သွားပါတယ်။
၇။ ဖေဖေမေမေတို့ ဘာလုပ်ပေးစေချင်လဲ
ထောက်ခံပေးတဲ့သဘောပါ။ ကိစ္စတွေအားလုံးပြီးသွားပြီ၊ အားလုံးလည်းအေးဆေးသွားပြီးရင် …နောက်ဆုံးမေးခွန်းမေးလို့ရပါပြီ၊
Recommended for you – ကိုယ်က အရှုံးမပေးမချင်း မရှုံးပါဘူး
၈။ နောက်ဆုံးရလဒ်ကဘယ်လိုလဲ၊ မင်းမျော်လင့်တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာသလား
နောက်တစ်ခါ အလားတူပြသနာမျိုးကြုံခဲ့ရင် မင်းဒီလိုပဲဆက်ဖြေရှင်းမလား ၊ မင်းပြောခဲ့တဲ့ ဘယ်နည်းလမ်း နဲ့ရှင်းခဲ့ရင် ဘယ်လိုဖြစ်မယ်လို့ မင်းထင်လဲ။ စကားစမြည်ပြောတဲ့သဘောပါ။ ဒီလိုပြသနာ ရှင်းနည်းမျိုး အကြိမ်အရည်အတွက် နည်းနည်းများလာရင် ကလေးဟာရင့်ကျက်လာပြီး သူ့ကိုသူနိုင်နင်း သွားမှာပါ။
အရေးကြီးတာက ကိုယ့်ကိုကိုပဲအားကိုးရမယ်ဆိုတာ ကလေးသိသွားတယ်။ ကိုယ့်ရွေးချယ်မူကို ကိုယ်ပဲတာဝန်အပြည့်အ၀ယူရမယ်ဆိုတာသိသွားတယ်။ ကိုယ့်ကိုကို တာဝန်ယူတတ်သွားမယ်။ လွတ်လပ်စွာစဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်သွားပါမယ်။ မိဘများ…အသုံးပြုကြည့်ပါ။ အဆင်ပြေနိုင်ကြပါစေ။
Credit : sayar aungkolatt
– ကစားစရာ ပစ်ပေါက်ရင်….